Intshayelelo yeNkampani- iChengdu Cast Acrylic Panel Industry Co., Ltd.
I-Chengdu Cast Acrylic Panel yoShishino Co., Ltd.
Inkampani yethu engumzali iMonarch Sanitary Ware yasekwa, egxila ngokungagungqiyo kwizinto ezintsha kwaye yazisa iimodeli ezintsha kwintengiso. Kodwa umgaqo-nkqubo osisiseko kunye noqeqesho kukwenza kuphela iimveliso ezinobunkunkqele kunye nekhuselekileyo, yiyo loo nto uphawu lwe-Monark brand lunomntwana apho.
Ngokwandiswa kwe-Monarch, iimfuno zamacwecwe e-acrylic acocekileyo ayenyuka ngokukhawuleza, kodwa abathengisi abafanelekileyo kwakunzima ukufumana. Ukuqwalaselwa kokubaluleka kwamashiti e-acrylic kwizinto ze-acrylic zococeko, kufuneka ababoneleli babonelele ngemigangatho ephezulu kunye nokuzinzileyo kweemakhishithi ze-acrylic, ukubonelela ngenkxaso epheleleyo kunye nenkonzo ebambisene kakhulu, kunye nokudibana nexabiso lethu le-eco-friendly kwaye likhuselekile. Nangona kunjalo, olo hlobo lwababoneleli kwakunzima kakhulu ukufumana ngaloo minyaka e-China. Ngaphantsi kwale mvelaphi, inkampani yethu yeqela yagqiba kwelokuba iseke eyakhe iicrylic sheet sheet mveliso.
I-Chengdu Cast Acrylic Panel Industry Co., Ltd. yasekwa, inophawu "Duke".
Kwinqanaba lokuqala, i-Duke Acrylic Sheets ikakhulu ibonelele ngezinto zecandelo lezinto zokucoceka. Ngombulelo kwinqanaba eliphezulu lemigangatho emiselweyo ngokukhawuleza, iishiti zethu ze-acrylic ziye zafumana ukuthengisa okuthe kratya. I-brand "Duke" yaziwa e-China. Ukwandisa ingeniso yenkampani kunye nokunciphisa ukuthembeka kwiqela, sonyuse utyalomali kwimakhishithi yemiqondiso kunye nesithintelo sesandi, kwaye siqwalasele amandla e-R & D ukukhonza abathengi abaninzi.
Ukuza kuthi ga ngoku, siyinkampani exhomekeke ngokupheleleyo kumthengi wethu ukuze siphile kule marike yokhuphiswano. Isithintelo sesandi semakhishithi e-acrylic, umbala we-acrylic sheet, amashiti acacileyo kunye neemakhishithi zococeko ziindidi ezine ngokubanzi esizibonelelayo, iishiti ze-LGP, amashiti okusasaza, amashiti e-fluorescent, njl. Sinqwenela ukufaka isandla kule nguqu ngempumelelo ibe ngamaqela ethu, ngakumbi iqela le-R & D, lixhasa imigaqo-nkqubo yenkampani ngokuqhubekayo, lisivumela ukuba sinike abathengi bethu izisombululo ezikumgangatho ophezulu.
Kolu phuhliso lulandelayo, asiyi kuyilibala injongo yethu yoqobo, ukubonelela abathengi bethu ngemveliso eco-friendly nekhuselekileyo, ukuthatha uxanduva lwethu kwezentlalo, kunye nokufuna impumelelo eqhubekayo kunye nophuhliso ixesha elide.